Corona နဲ့ myths များစွာ - Hello Sayarwon
Update Date မေ 11, 2020 .3mins read
အခုလက်ရှိမှာ SARS-CoV-2 လို့ အများကသိထားကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ကနေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအသွင်ဆောင်လာခဲ့ပြီး အများက စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရောဂါပိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်း သိထားတာမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီတေ့ COVID-19နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်သိထားတာတွေက တကယ်လား၊ မှားနေလားဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ရင်း ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်လား…………..
Myth 1. ..အရေပြားပေါ်မှာ ကလိုရင်း ဒါမှမဟုတ် အယ်လ်ကိုဟောဖြန်းပေးတာက ကိုယ်တွင်းထဲက ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို သေစေနိုင်တယ်
ဒီလိုလုပ်တာက အန္တရာယ်များပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟော ဒါမှမဟုတ် ကလိုရင်းဆေးရည်တွေက မျက်လုံးထဲ၊ ပါးစပ်ဝင်သွားတဲ့အခါ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက အရာဝတ္ထုတွေ၊ မျက်နှာပြင်တွေပေါ်က ပိုးတွေကို သုတ်သင်ပေးနိုင်ပေမယ့် အရေပြားပေါ်မှာ အသုံးပြုဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
ဒီပစ္စည်းတွေက ကိုယ်တွင်းက ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။
Myth 2…. ဒီရောဂါပိုးက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်
COVID-19 က အရွယ်မရွေးမရွေး ကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အသက် ၈၀ နှစ်အထက် ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ ပန်းနာရင်ကျပ်တို့လိုမျိုး နာတာရှည်ရောဂါအခံရှိသူတွေက ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ များနေနိုင်တဲ့အချက် တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ သူတိုင်းမှာလည်း ကူးစက်နိုင်ခြေ ရှိတာကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကို အသက်အရွယ်မရွေး လုပ်သင့်ပါတယ်။
Myth 3……ကလေးတွေမှာ COVID-19 မဖြစ်ဘူး
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ COVID-19 က စလို့ လူကြီးအထိ အသက်အရွယ်မရွေး အားလုံးမှာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အခုထိ ကလေးတွေမှာ ကူးစက်တယ်လို့ တွေ့ရနည်းနေသေးတာတော့ ရှိပါတယ်။
Myth 4…… COVID-19 က တုပ်ကွေးနဲ့ဆင်တူတယ်
SARS-CoV-2 ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ တုပ်ကွေးဖြစ်သလို ကိုယ်လက်တွေ ကိုက်ခဲတာ၊ အဖျားတက်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ ခပ်ပျော့ပျော့ဖြစ်နိုင်သလို ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်တာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးကတော့ အဆုတ်ရောင်စေနိုင်တာပါပဲ။
တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေက COVID-19 လောက်တော့ မပြင်းထန်ပါဘူး။
Myth 5…… COVID-19 ခံစားရရင် သေမှာပဲ
ဒါက မမှန်ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ရောဂါခံစားရသူ အနည်းစုလောက်ပဲ အသက်ဆုံးရှုံးတာပါ။ ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူတိုင်း သေဆုံးမယ်လို့ တထစ်ချ မဆိုသာပါဘူး။
ရောဂါ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့အခါ ကိုယ်ပူတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျတာ၊ အသက်ရှူရ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်တာတွေ ခံစားရပြီး ပြန်သက်သာလာနိုင်ပါတယ်။
Myth 6….. ကြောင်လေးတွေ ခွေးလေးတွေဆီကနေ coronavirus ကူးစက်နိုင်တယ်
ကြောင်လေးတွေ၊ ခွေးလေးတွေဆီကနေ COVID-19 ကူးစက်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Myth 7….. နှာခေါင်းစည်းတွေက coronavirus ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေအသုံးပြုနေတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ၊ နှာခေါင်းစည်းတွေက ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ပေမယ့် တစ်ခါသုံး နှာခေါင်းစည်းတွေက အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ အတိအကျပြောလို့ မရပါဘူး။
နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ထဲကို ရောဂါပိုးတွေ တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်မလာစေဖို့ ထိုက်သင့်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိတော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အပြည့်အဝကြီးတော့ ပြောဖို့ခက်ပါမယ်။
Myth 8……လက်အခြောက်ခံစက်က coronavirus ကို သေစေနိုင်တယ်
လက်အခြောက်ခံစက်က coronavirus ကို မသေစေနိုင်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းက လက်ကို ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး သေချာ သန့်စင်အောင်ဆေးကြောတာပါ။
Myth 9…. လူတစ်ယောက်နဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက် နီးနီးကပ်ကပ်နေရင် ပိုးကူးနိုင်တယ်
လူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ တစ်ယောက်ယောက် နဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက် နီးနီးကပ်ကပ် နေရုံနဲ့ ကူးတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါကူးစက်တာက အချိန် အတိုင်းအတာနဲ့ တွက်ချက်လို့ မရပါဘူး။ ၁၀ မိနစ်ထက်လည်း နည်းနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ အရာတွေကို ကိုင်တွယ်မိရာကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Myth 10…… နှာခေါင်းကို ဆားရည်နဲ့ဆေးကြောရင် coronavirus ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်
နှာခေါင်းကို ဆားရည်နဲ့ ဆေးကြောတာက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူး။
Myth 11…….. ဆားရည်နဲ့ အာလုပ်ကျင်းပေးတာက ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
ဆားရည်နဲ့ အာလုပ်ကျင်းပေးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပေမယ့် coronavirus ကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
Myth 12…… Antibiotics က coronavirus ကို တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်
Antibiotics က ဘက်တီးရီးယားကိုပဲ တိုက်ဖျက်နိုင်တာပါ။ viruses တွေကို မတိုက်ဖျက်နိုင်ပါဘူး။
Myth 13 ………. အပူချိန်တိုင်းတာက coronavirus ရှိ၊မရှိ သိနိုင်တယ်
အဖျားတိုင်းတံတွေက ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကိုပဲ တိုင်းတာပေး နိုင်တာပါ။ အဖျားရှိလားဆိုတာကလွဲလို့ ဘာကိုမှ မသိရှိနိုင် စေပါဘူး။ အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေကြောင့်လည်း အဖျားရှိနိုင်ပါတယ်။
Myth 14…… ကြက်သွန်ဖြူက coronaviruses ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
ကြက်သွန်ဖြူက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပေမယ့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုတော့ မတိုက်ဖျက်နိုင်ပါဘူး။ COVID-19 က ဗိုင်းရပ်စ်ပါ။
Myth 15….. တရုတ်ကလာတဲ့ ပစ္စည်းထုပ်တွေကနေ coronavirus ကူးစက်နိုင်တယ်
ဒီဗိုင်းရပ်စ်က စက္ကူထုပ်တွေ ထုပ်ပိုးထားတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ အချိန်အကြာကြီး အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပို့ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတင် သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေက သင့်ဆီ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
Myth 16 …… နေပူရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က သေသွားတယ်
တုပ်ကွေးနဲ့ အအေးမိရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာ အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်ပေမယ့်ရာသီဥတု ပုူလာတဲ့အခါ ကူးစက်နှုန်း နှေးသွားတာပဲရှိပါတယ်။ လုံးဝသေသွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း ဒီလိုပါပဲ။
Myth 17 ….. တုပ်ကွေး၊ အဆုတ်ရောင် ကာကွယ်ဆေးတွေက COVID-19 ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
SARS-CoV-2 က အခြားဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ မတူတဲ အမျိုးအစားအသစ် တစ်မျိုးပါ။ အခုချိန်ထိ ကာကွယ်ဆေး မရှိသေးပါဘူး။
Coronavirus myths explored https://www.medicalnewstoday.com/articles/coronavirus-myths-explored Accessed Date 22 March 2020
Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Accessed Date 22 March 2020
HIV ပိုးရှိသူတွေ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရလား ....... HIV ပိုး ရှိသူတွေလည်း အခြားသူတွေ နည်းတူ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးနှံနေကြပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 16, 2021 .2mins read